Sheekada filimka Tiger Zinda Hai: Salman iyo Katrina waxay la imaadeen filim waqti iyo lacag loo quuri karo! – Filimside.net
Waxaa maanta tiyaatarada la saaray filimka ugu weyn uguna hadal heynta badan Bollywood-ka la imaadeen 2017 mid kale ma ahan waa Tiger Zinda Hai.
Jilaayaasha: Salman Khan, Katrina Kaif, Sajjad Delafrooz (waa jilaa Iran u dhashay balse UAE ku nool ahna laadarka filimkaan), Angad Bedi, Kumud Mishra, Girish Karnad, Paresh Rawal.
Sanadka wuxuu ku dhow yahay gabo gabo waxaana xiliyadaan oo kale Bollywood-ka la imaadaan filim weyn oo tayo ahaan dhan walbo ka dheeli tiran si dadka feestada masiixiga iyo dabaal daga sanadka cusub firaaqada u heestaan tiyaatarada loogu soo jiito.
Kadib Bandhigiisii Taariikhiga Ahaa Bajrangi Bhaijaan Iyo Sultan Wuu Soo Laabtay Salman Asigoo La Yimid Bnadhig Mudo Dheer La Hada Heyn Doono!
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka TZH: Inkastoo TZH uu yahay filim Salman Khan, hadana Katrina Kaif iyo isaga is fahanka ka dhaxeeyo iyo dhamaan jilaayaasha kale doorarka laga siiyay ayaa ka dhigtay in filimkaan uu yahay mid ka mid ah aflaanta ugu dheeli tiran ee Bollywood-ka sameeyaan.
Muxuu Ku Liitaa: Filim walbo oo la taxliilinaayo iin looma waayo laakiin TZH dhaliil loo soo jeedin karo maba jirto madaama marnaba filimka uusan ku yara caajis galineyn waa filim loo diyaariyay inaadan indhaha ka qaadin 2-saac iyo 41-daqiiqo uu soconaayo filimkaan.
Daawo Ama Ha Daawanin: Xitaa hadii Salman Khan uusan waligiis ku mada daalin ama kusoo jiidanin (Inkastoo ay naadir tahay) hadana TZH daawo waa hubaal inaad Salman u sacabo u tamu doontid ama ugu yaraan qiri doontid bandhigiisa taariikhi ah, markaan Blockbuster Khan yuusan ku seegin filimkiisa TZH.
Fariinta Filimkaan Xambaarsan Yahay Nuxurkeeda: TIGER ZINDA HAI waa sheeko ka dhaxeyso sirdoonka Hindiya iyo Pakistan oo ku midoobayaan hal arin oo ah inay dadkooda ISIS kasoo furtaan.
Tiger (Salman Khan) iyo Zoya (Katrina Kaif) sidaan wada ogeyn qaybta hore Ek Tha Tiger waxay ka baxsadeen sirdoonka Hindiya iyo Pakistan oo ay kala tirsanaayeen si ay jaceyl iyo nolol cusub u sameesteen waxayna ku nool yihiin buuraha Yurub ku yaalo.
Dhinaca kale magaalada Ikrit ee dalka Ciraq ka tirsan waxaa hogaamiye ka noqday Abu Usman (Sajjad Delafrooz) oo ah hormuudka ISIS ururka argagaxisada aduunka ugu awooda badan dhaqaale ahaan iyo militari ahaan waxayna ka taliyaan inta badan Ciraaq.
Militariga Mareekanka ayaa weerar kusoo qaadayaan Abu Usman (Sajjad Delafrooz) iyo ciidankiisa waxayna dhaawac u geesanayaan Abu Usman (Sajjad Delafrooz).
Abu Usman (Sajjad Delafrooz) oo dhaawac ah iyo kooxdiisa inta bad baaday waxay afduubanayaan 40-qof oo kal kaaliyaan ah 25-Hindi ah iyo 15-Pakistani ah iyo isbitaalkii ay joogeen waxayna ku amrayaan inay Abu Usman (Sajjad Delafrooz) daaweeyaan.
Mareekanka waxay go’aan ku gaarayaan hal todobaad gudaheeda hadii Abu Usman (Sajjad Delafrooz) iyo ciidankiisa aysan sii deynin kal kaaliyaasha inay Isbitaalka duqeyn doonaan.
Sidaa darteed sirdoonka Hindiya oo heestaan hal todobaad sidaa darteed madaxa ugu sareeyo sirdoonka Hindiya Shenoy (Girish Karnad) wuxuu soo jeedinaa in Tiger (Salman) la baadi goobo uuna yahay shaqsiga kaliya hawl galkan loo dhiibi karo.
Tiger (Salman) halka uu joogo waa la soo helaa wuxuuna u aqbalaa hawl galkan halista ah si uu qarankiisa u bad baadiyo madaama sharafta sirdoonka Hindiya isaga la hoos keenay si uu 40-kal kaaliyaan Hindi iyo Pakistan isugu jiraan usoo bad baadiyo.
Tiger Zinda Hai qaybta xiga waxaa loo daawan doonaa sida Tiger hal galkan ugu guuleesan karo, caqabadaha ka hor imaanayo iyo xitaa jaceylkiisa Zoya (Katrina) oo iyadana sirdoonka Pakistan ku laalabaneyso sidii ay hawl galkan garab ugu siin laheyd.
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka TZH: Neelesh Misra iyo Ali Abbas Zafar qaabka ay sheekada u qoreen ayaa ah waxa ugu weyn ee TZH ka dhigay filim waqti iyo lacag loo quuri karo.
Ali Abbas Zafar hadii uu Sultan kaaga yaabsaday isku dabaridkiisa waxaa ka daran sida uu TZH u sameeyay wuxuu u cadaalad falay awooda Salman Khan asigoo niyada ku haayay taageerayaasha baaxada weyn ee uu Superstar-kan leeyahay, marka kowaad uu Salman shaashada soo galayo waaa hubaal in qof walbo u sacbin doono iyo muuqaalka Action-ka Salman iyo Yeeyda barafka ku dagaalamayaan si caalami ah ayaa loo sameeyay.
James Forward si heer sare ah ayuu Action-mada filimkaan u sameeyay iyo is bursiga xiisaha badan waxaana muuqato in mashruucaan la isugu tagay sidii looga dhigi lahaa mid tayadiisa 100% dheeli tiran tahay.
Bandhiga Jilaayaasha: Iska hilmaan inuu kugu niyad jebiyay Tubelight wuxuu taageerayaashiisa ku xaal mariyay bandhigiisa taariikhiga ah TZH oo mudo dheer la hadal heyn doono.
Salman TZH wuxuu ku sameeyay wajiyo kala duwan sida jaceylka, murugada, ka fikirada qoyskiisa, hawsha sirdoonka iyo xanuunka ay ku heyso kal kaaliyaasha Hindiga ah ee xaalad adag ku sugan.
Waa hubaal in daawadayaasha ku raaxeesan doonaan doorkiia TZH xitaa hadii aadan Salman taageero u ahayn qaab jiliinkiisa heerka sare iyo mashruucan tayada wanaagsan iskama indha tiri kartid.
Katrina Kaif iyo Salman Khan waaba la isugu tala galay waxaana wanaagsan inay marwalbo shaashada kasoo wada muuqdaan xidigtaan talaabada uu Salman qaado mid la mid ah ayay qaadeysaa TZH.
Waxayna ku leedahay door adag ayadoo Action-ka si heer sare ah u sameeneyso sidoo kalena doorkeeda waa mid ku xeen daaban sheekada filimkaan.
Sajjad Delafrooz laadarka filimkaan si cajiib badan ayuu doorkiisa u matalay mana noqon laheyn TZH filim xiiso badan hadii doorkiisa qamarjinimo ee kartida dheeraadka ah ka muuqato laga saaro.
Dhamaan jilaayaasha kale ee filimkaan kasoo muuqdeen sida Paresh Rawal, Anged Bedi iyo kuwo kale muhiim ayay sheekada u yihiin mid walbana doorkiisa aad ayuu u wacan yahay.
Gunaanad: TZH waa filim Action heer sare ah leh, mada daalo dhameestiran loo yaalay waana hubaal inuu Boxoffice-ka wacdaro taariikhi ah ka dhigi doono, kani waa Blockbuster cidna celin karin hogaamiyana ka yahay Blockbuster Khan!
Dadka filimada ka faaloodaan cel celis ahaan badankooda TZH waxay siiyeen 4/5 taasi oo ka dhigan in sheekadiisa ka mid tahay kuwa ugu wanaagsan 2017.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Tiger Zinda Hai:
Waxaa Aqrisay 2,024
Malaga Yaaba Shaqaalaha Filimkan haba ugu horeeyan jilayasha filimkan iyo Drectorka inay Halis uGalaan Kooxda ISIS Madama Ay Tahay koox aboodeeda wali TaganTahay sidookalena aysan jirin Wardiyayaal ku filan Jilayasha una BabacDhigi kara Halista kooxdan mayalka adag maxayse ka dheheen(isis) Filimkaan
Faahfahin iga siiyaa arinkaan Mahadsanidiin dhamaan Shaqalaha Filimside